Sababaha Madax Xanuunka Keena Xilliga Soonka, Sida Looga Hortegi Karo Iyo Talooyin Muhiim Ah | Salaan Media
Sababaha Madax Xanuunka Keena Xilliga Soonka, Sida Looga Hortegi Karo Iyo Talooyin Muhiim Ah
Hargaysa (Salaanmedia.com)_ – Inta badan bisha soonka inta lagu gudo jiro dadku waxa ay ka cawdaan madax xanuun. Qormadan waxa aynu ku eegaynaa waxyaabaha ay khubarada caafimaadku ka sheegeen madax xanuunkaas maalinnimada soonka la isku arko.
Qormadan waxa uu Geeska Afrika ku eegayaa madax xanuunka xilliga soonka iyo sida uguhabboon ee loola tacaali karo:
Madax xanuunka: Ugu horreyn madax xanuunka waqtiga soonku inta badan waxa uu qofka qabtaa duhurka kadib ama casarka oo gaadhsiisan ilaa waqti yar ka hor af-furka. Inta badan waa madax xanuun soo noqnoqda inta soonka la wado, dadka xilliyada aan soonka ahayn madax xanuunku ku badan yahayna xilliga soonkana waa ay kaga badan yihiin dadka kale
Sababta iyo sida looga hor tegi karo:
– Ugu horreynba waa in qofku uu ku dadaalo in maalmaha bilashada Soonka ka horreysa uu si tartiib-tartiib ah u soo yareeyo xaddiga Caffeine ee uu qaadanayo, tusaale ahaan in uu yareeyo bunka iyo shaaha uu cabbayo illaa uu gaadho in maalinta soonka ka horreysa joojiyo.
– Heerka sonkorta / Macaanka dhiigga oo soonka awgii hoos u dhacaa waxa ay ka mid tahay sababaha ugu waaweyn ee dadka badankooda madax xanuunka ku keena bisha soonka. Gaar ahaan madax xanuunkan waxaa la arkaa maalinta koowaad ee soonka, weliba marka uu qofku maalinta ka horreysay soonka isticmaalo macaan badan oo keenaya in uu macaanku si xawaare ah kor ugu kaco, haddana maalinta koowaad ee soonka mar keliya si degdeg ah hoos ugu soo dhaco. Sida ugu fiican ee looga hortegi karaana waa in qofku uu maalmaha soonka ka horreeya si tartiib-tartiib ah u soo yareeyo macaanka uu qaato, si naftii uu u carbisan hoos u dhaca macaanka soonku u bilowdo.
– Biyaa jidhka oo hoos u dhaca: jidhkeennu boqolkiiba 50 illaa 75 waa biyo, unugyo ka mid ahna boqolkiiba 90 ayaa biyo ah, taas waxa ay caddaynaysaa sida aanu jidhku biyaha uga maarmi karin, hoos u dhacooduna waxa uu keenayaa jidhka oo engaga waxaana ka dhasha madax xanuun badan.
Sida ugu habboon ee aad uga hortegi karto madax xanuunka ku imanaya engagga jidhka waxaa fiican in xilliga afurka aad hesho cabbitaan kugu filan, sharaab, maraq biyo iwm, gaar ahaan xilliga suxuurta. Biyo aad u qabow oo aad cabtaa harraadka ba kaxeeyaan, umana fiicna caafimaadka, sidaa awgeed ku dadaal in cabbitaanka aad cabbaysaa uu noqdo mid aan aad u qaboobayn ama sida ugu fiican in uu noqdo mid yara diirran.
– Sigaar nuugistu waa caado xun oo caafimaadka qofka cadow ku ah, maaddooyinka ku jira awgeedna haddii qofka caadaystaa uu si kedis ah u joojiyo waxaa ku yimaadda madax xanuun iyo in uu ka maqnaan kari waayo, taas oo ah waxa ay dadka nuugaa ku magacaabaan xaraaradda. Haddaba si aad xilliga Ramadaanka uga badbaaddo madax xanuunka sigaarka la’aantii yimaadda, waxaa fiican in Ramadaanka ka hor aad qiyaas laba toddobaad ah aad marba sii yarayso sigaarka aad nuugayso, illaa aad soo gaadho maalinta soonka ka horreysa in aanad sigaar shidan. Waayo-aragnimada dad badani arkeen ayaa sheegaysa in Ramadaan ay tahay xilliga ugu fiican ee uu qofku iska jari karo balwadda sigaar nuugista ee khatarta ku ah caafimaadkiisa.
– Gaajada badani waxa ay keentaa madax xanuun, jidhka iyo xaglaha oo burbura iyo qofka oo tamar beela, haddaba si aad uga taxaddarto in xilliga soonka ee maalintii ay gaajo badani ku soo gaadho, waxaa fiican sida Shareecada Islaamkuba ina farayso in aynu goor dambe suxuuranno oo weliba ay noqoto cunto caafimaad ahaan faa’ido leh oo la hubo in aanay caloosha hore uga baxayn.